Stouffville Honda - iibka Honda ee Stouffville
ADEEGGA & QAYBAHA
Buugga A Tijaabada Tijaabada
La kulan Ciyaartaada
La kulan CiyaartaadaLa kulan Tartankaaga
Adeeg: 1-877 673-7348
Iibka: 1-877 673-7348
Sheekeysi joogto ah
Raadi Baabuur Cusub
Raadi gawaarida ugu tayada sareysa uguna sarreysa ee warshadaha. Kuma khaldami kartid Honda.
Wicitaan Video ah ama Wadahadal Toos ah Hada!
Nidaamkeena gaarka ah wuxuu kaa caawinayaa inaad isku xirto habka aad rabto. Waad go'aansan kartaa cidda aad rabto inaad ku xirto iyo sida loo sameeyo. Xitaa heshiis waad sameyn kartaa!
Ballan Ballan Adeeg
Waxaan kuu diyaarinay habab badan oo aad ku xirto adiga kugu habboon. Xullo mid ka mid ah waxyaalaha gaarka ah ee aan bixinno ee hoose ama ballan ka qabso ballantaada internetka oo xulo waqtigaaga.
Raadi Baabuur La Isticmaalay
Ka fiirso xulasho aad u ballaaran oo ah heshiis kiro ah iyo ganacsiyo tayo sare leh oo dhowaanahan la soo dhaafay. Waxaan leenahay gawaari badan oo aan kula kulanno miisaaniyadaada.
Samee Buugga Imtixaanka
Kuqorso foomkeena soonka fudud ee fudud hoosta ama kuxiriir wakiilka iibka ee aad dooratay si aad uhesho codsi gaar ah. Eeg boggayaga kooxda iibka gaarka ah.
Xawaaraha Gawaarida Degdega ah Kabix
Mararka qaarkood marwalba ma cadda sida loo dhigo gawaarida saacadaha kadib ama sida loo sameeyo codsiyada adeegga gaarka ah. Si fudud u daabac foomkeenna kuna dhaaf gaarigaaga markii aad soo dejiso.
Adeegga & Qeybaha
BOOQ IMTIXAADKA WADA HADAL!
Samee / Model
Xulo Taariikh iyo Waqti
Markaad soo gudbiso foomkan waxaad jadwal u samayn doontaa ballan wadista tijaabada iyada oo aan wax waajib ah lagaa helin oo lala soo xiriiro sida ugu dhakhsaha badan ee iibiyaha.
Maalgelinta Ayaa Si Fudud Loo Sameeyay
Waaxdeena maaliyadeed ee walbahaarka aan walbahaarka laheyn waxay heli kartaa xalal dhaqaale si lacag kuugu keydsato
XULASHADA GAADIIDKA CAD
Iyada oo xulashada weyn ee baabuurta cusub iyo kuwa la isticmaalay, oo ay weheliso helitaan badan oo badan, waxaan ku dadaalaynaa inaan kaa saarno gawaarida baabuurkaaga.
Ku Kalsoon yihiin Kumanaan
Dalabyo cusub maalin kasta. Bixin badan ayaa goobta ka socota, oo ay ku kalsoon yihiin beel kumanaan isticmaale ah.
Adeegga Baabuurta & Dayactirka
Waaxdayada adeegga waxay ilaalinayaan gaarigaaga si ay nabad ugu ahaadaan wadada sannado badan oo dheeri ah.
ADEEGA & GADDAYN
HAY'ADDA HAY'ADDA 2 ADEEGGA
Ku neefso hawo nadiif ah
Gawaarida inta lagu jiro xilliga soo socda.
Miiraha hawada ee gaarigaaga wuxuu ka saaraa wasakheynta hawada sida boodhka, manka, qiiqa, iyo caaryada ka soo baxda hawada soo galaya gaarigaaga.
XIRFADDA TIIRKA Jiilaal
Shaagagga birta ah
X-baraf 16 taayirro inji ah
Rakibaadda iyo Dheelitirka
Jiilaalka Taayirada Jiilaalka
Taayiro xilliyeed ku rakib dusha
Dheeraad ah isku dhejinta 4-taayir
Kordhi oo dheelitir taayirrada xilliyeed
Diiwaangeli $ 179.95 oo lagu daray canshuuraha
Iibso oo rakibo qaybo ka mid ah gabal gabal gabal dhab ah oo 'Honuine Honda pads' waxaanan ku siin doonaa suufyo beddelaad u ah isla nidaamka qaybta bareegga lacag la'aan inta aad gaariga leedahay!
Weydii faahfaahin ama booqo Honda.ca
Saliida iyo shaandhada isbadal
Wareeg oo dheelitir taayirrada
Kormeerka nidaamka qaboojinta
Liiska hubinta amniga dhibcaha badan
Kordhi nolosha taayiradaada
Kordhi nolosha qaybaha ka joojinta
Kordhi nolosha qaybaha gawaarida
Kordhi waxtarka shidaalka
Khibrad wadista fudud
Taayirada wareeji, iska hubi duugga, oo hagaaji cadaadiska.
Shayga ugu muhiimsan B / B1 / 09
Saliida matoorka caadiga ah ee ka
Beddel saliidda mishiinka iyo miiraha.
Taayirada wareega, baari duugga & cadaadiska hagaaji.
Adeeg biriiga hore & gadaal.
Isku day inaad bedesho bedka gaariga.
Kormeer dhamaadka usheeda dhexe, qalabka isteerinka & kabaha.
Kormeer qaybaha cayrinta.
Iska hubi kabaha mootada.
Kormeer tuubbada xariijimaha & xariijimaha (oo ay ku jiraan ABS).
Hubi dhammaan heerarka dareeraha, xaaladda dareeraha & hubi inay daadanayaan.
Kormeer nidaamka saqafka.
Kormeer khadadka shidaalka & isku xirnaanta.
U fiirso taariikhda dhicitaanka dhalada loogu talagalay dhalada Tire Repair Kit (haddii qalabaysan)
Bedel nambarka nadiifiyaha hawada.
Bedel boodhka iyo miiraha manka.
Kormeer oo hagaaji suunka wadista.
Saliidka mashiinka tamarta ah ee laga soo saaro
Ku beddel qaboojiyaha tamarta.
Shayga ugu muhiimsan 0
Beddel saliidda mishiinka iyo miiraha
KHATARAHA LAGA HELAY
Waxaan CRV-ga ka qaatay Stouffville Honda! Adeeg macmiil weyn iyo raalli ahaansho la macaamil Charles Woon-A-Tai oo howsha ka dhigay mid fudud oo aan walwal lahayn. Ganacsi weyn!
Waxaan aad ugula talinayaa ganacsigan!
Xaaskeyga & aniga aad ayaan ugu faraxsanahay 2020 Honda CRV cusub ee aan ka iibsanay Stouffville Honda. Kooxda iibka, gaar ahaan Michael Lee, waxay ahaayeen xushmad, dulqaad iyo edeb badan. Waxaan aad ugula talinayaa ganacsigan.
Sideen ku qabanay? La wadaag khibradaada nala wadaag!
Qoraan Google Review
Akhriso Faallooyinka Google
Foomka Jawaab celinta
HONDA AAN LAGA HELO.
Waxaad qabtaa su'aalo, waxaan leenahay "nool", jawaabaha shaqsiyeed.
Haa! Khubaradayada wax soosaarka takhasuska leh waa la taabtay si ay uga jawaabaan dhammaan weydiimahaaga wada-hadalka kooxda waqtiga-dhabta ah.
La kulan ciyaartaada oo xiriir la samee wakiilka aad dooratay.
My Stouffville Honda waxay bixisaa khibrad dhameystiran oo dhanka isgaarsiinta ah oo ku saabsan wax kasta sida maalgelinta, adeegga gawaarida iyo xulasho ballaaran oo gawaarida loogu talagalay dukaameeysatada baabuurta ee GTA, Gobolka York, Stouffville, Uxbridge iyo aagga ku xeeran.
My Stouffville Honda waa meesha ugu dambeysa ee khibradaada dukaameysiga gaarigaaga.
Isniinta - Khamiista: 9: 00AM - 9: 00PM
Friday, 9: 00AM - 6: 00PM
Saturday, 9: 00AM - 5: 00PM
Axad: La xiray
Isniinta - Arbaco: 8: 00AM - 6: 00PM
Khamiis 8: 00AM - 7: 00PM
Friday, 8: 00AM - 6: 00PM
Saturday, 8: 00AM - 4: 00PM
© 2021 Stouffville Honda - Xuquuqda daabacaadu way xifdisan. Dhamaan taranka gabi ahaanba ama qayb ahaan, ayaa si adag loo mamnuucay iyada oo aan ogolaansho cad laga helin Stouffville Honda. Naqshadaynta goobta by Adeegyada Dijital ee MiGuy. Boggan waxaa ilaalinaya reCAPTCHA iyo Google Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo Terms of Service codso.
Xulo adeeg *
Adeegga Dayactirka Minder 2 Xirmada Taayirada Jiilaalka Fall Gaarka ah Suugaanta Waqtiga Gaarka ah Nolol-Biriigu-suufka 4-Iswaafajinta Lugaha Qaab-hoosaad 1 Qaab-hoosaad 2 Qaab-hoosaad 5 Shayga ugu Weyn B / B! / 09 Qeybta ugu muhiimsan 0
Adiga oo calaamadeeya sanduuqan, waxaad aqbashaa kuweenna Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Jadwal Jadwalka Tijaabada